August 2020 - Latest Myanmar News
ဆေးခန်းပြတာ ၁သိန်းကျော်ကုန်တယ်…တူမလေး နားပြည်ယိုတာ ဒီနည်းလေးနဲ့မှ ပျောက်သွားလို့
August 31, 2020 by Latest Myanmar News
ကျမရဲတူလေးနားပြည်ယိုတာ သုံးလတိတိပါဆေးခန်းလဲပြတယ် မပျောက်ဘူး ။ ငွေလဲတစ်သိန်းကျော်ကုန်တယ် ။ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ဆေးနည်းလေး ပြောပြလို့ကျောက်ချည်ကိုသွေးပီးနှားမှာနှာလည့်လေးနဲ့ထည့် ပေးလိုက်တာလက်တွေ့ပျောက်ပါတယ် ဆေးနည်းလေးမျှဝေပါရစေရှင့် ဒေါ်ခင်မြင့်အောင် Unicode ကမြရဲတူလေးနှားပွညျယိုတာ သုံးလတိတိပါဆေးခနျးလဲပွတယျ မပြောကျဘူး ။ ငှလေဲတဈသိနျးကြျောကုနျတယျ ။ သူငယျခငျြးတဈျယောကျဆေးနညျးလေး ပွောပွလို့ကြောကျခညျြကိုသှေးပီးနှားမှာနှာလညျ့လေးနဲ့ထညျ့ ပေးလိုကျတာလကျတှပြေ့ောကျပါတယျ ဆေးနညျးလေးမြှဝပေါရစရှေငျ့ ဒျေါခငျမွငျ့အောငျ
ထိပ်ကပ်နာရှိလျှင် ဒန့်သလွန်မြစ်လေး လိမ်းကြည့်ပါ
ထိပ်ကပ်နာ ဆေးနည်း ကျွန်တော် ထိပ်ကပ်နာ ဖြစ်နေတာ ၅. နှစ်လောက် ရှိနေပါပီ ။ ဘယ်ဆေးနဲ့မှ မသက်သာခဲ့ပါဘူး ဒန့်ဒလွန် အမြစ်ကိုသွေးပီး လည်ပင်းမှာလိမ်းကြည့်ပါ ။တကယ် သက်သာပါတယ် ။ နှာခေါင်းပွင့်တယ် ချွဲမထတော့ဘူး နေရတာ သက်သာတယ် ။အအေးမခံပါနဲ့ အခုမှလိမ်းတာ သုံးရက်လောက် ပဲရှိသေးတယ် ။ ထိပ်ကပ်နာဝေဒနါရှင်အားလုံး ပျောက်ကင်းကြပါစေ တကယ်သက်သာတာပါ ။ နဲနဲပူတယ် စပ်လဲစပ်တယ် လိုင်းပေါ်ဆေးနည်းပေးတဲ့သူတွေလဲ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ဘဝတူတွေသက်သာပါစေ ရှိန်းဝင့်သူ Unicode ထိပျကပျနာ ဆေးနညျး ကြှနျတျော ထိပျကပျနာ ဖွဈနတော ၅. နှဈလောကျ ရှိနပေါပီ ။ ဘယျဆေးနဲ့မှ မသကျသာခဲ့ပါဘူး ဒနျ့ဒလှနျ အမွဈကိုသှေးပီး လညျပငျးမှာလိမျးကွညျ့ပါ ။တကယျ သကျသာပါတယျ ။ နှာခေါငျးပှငျ့တယျ … Read more
ရန်သူပင် ဖြစ်စေကာမူ မိမိအကျိူးစီးပွားကိုဆောင်ရွက်ပေးစေနိုင်သည့် မျက်နှာသစ်တော်ရေလှူရခြင်းအကျိုး
ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားရှင်အား..မျက်နှာသစ်တော်ရေကပ်နည်းလေးပါ ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားရှင်အား..မျက်နှာသစ်တော်ရေကပ်နည်းလေးပါ မခက်ပါဘူး..မနက်တိုင်းပူဇော်ကြစေဖို့ရွှေပေါ်ကျွန်းဆရာတော်ကြီး၏ ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားရှင်အားမျက်နှာသစ်တော်ရေကပ်နည်း နံနက်စောစော အရုဏ်လာချိန်တွင် ငွေဖလားနှင့်ဖြစ်စေ ကြေးဖလား နှင့်ဖြစ်စေ .. အေးမြကြည်လင်သန့်ရ်ှင်း စင်ကြယ်သောရေကိုထည့်ပြီး အရှေ့ဘက် သ်ု့ မျက်နှာမူ ၍ ..ထိုရေဖလားကို ဦးခေါင်းထက်တိုင်ပင့်မြှောက်ပြီး ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားရှင်အား ဆက်ကပ်လှုဒါန်းပါ ။ ” ဗုဒ္ဓံ သက်တော်ထင်ရှား မြတ်စွာဘုရား သခင်အရ်ှင် ကိုယ်တော်မြတ်ကြီး ဘုရား အား ဤ အေးမြကြည်လင် သန်ု့ရှင်းစင်ကြယ်တော်မူသော ..မျက်နာသစ်တော်ရေ .. အာလုပ်ကျင်းတော်ရေကိုဆက်ကပ်ပါ၏ ။ လှုဒါန်းပါ၏ အရှင် ဘုရား “ဟု့ နှုတ်မှိစိတ်မှလေးနက်ကိုင်းရှိုင်းညွတ်တွားစွာဖြင့်ဆက်ကပ်လှုဒါန်းပါ ။ပြီးသောအခါ .. ထိုရေတော်ဖလားကိုမလျက်ပင် ” ပဉ္စဗုဒ္ဓါ နဠာတေ တိဋ္ဌတု့ ” ဟု့ သက်စေ့ ထက်တစ်ခေါက် ပိုရွတ်ပေးပါ ။ ပြီးလျှင် … Read more
ဖျား ၊နှာစေးချောင်းဆိုးရင် အိမ်မှာဘဲနေပါ ဖျားရင် ပါရာစီတမော ၅၀၀မီလီဂရမ် သုံးကြိမ်သောက်ပါ နှာစေးရင် Cetrizine 10mg နှာစေးပျောက်ဆေး တစ်နေ့ တစ်ကြိမ်သောက်ပါ ချောင်းဆိုးရင် Over the counter ဝယ်သောက်လို့ရတဲ့ Zedex syrup/Bronchest/Tussolid/Atussin စသော ချောင်းဆိုးပျောက်ဆေးများ သုံးကြိမ်ခန့် သောက်ပါ မိသားစုနဲ့ ဝေးဝေးနေပါ ၊နှာခေါင်းစည်းတပ်ပါ ၊လက်မကြာခဏဆေးပါ ကိုဗစ်ရောဂါဆိုရင်တောင် ပျောက်သွားမှာပါ(85%) သုံးရက်လောက်နဲ့ မသက်သာရင်/ ကြပ်လာ မောလာရင်/အခံရောဂါရှိရင် ဥပမာ အဆုပ်ပွ ဆီးချို နှလုံးရောဂါများ ဆေးရုံကြီးသို့ သွားရောက်ပြသပါ GP ဆေးခန်းများမသွားပါနှင့် ဆေးခန်းများသို့သွားခြင်းသည် အခြားလူနာများရော ဆေးခန်းဝန်ထမ်းများရော ကူးစက်နိုင်သဖြင့် သင်လည်း ထိုသူများထံမှ ရောဂါကူးလာနိုင်သဖြင့် ကာကွယ်မှုပြည့်စုံသော ဆေးရုံကြီးသို့သာ သွားရောက်ကြပါရန် အမှန်အတိုင်း ရောဂါရာဇဝင် ပေးကြပါရန် … Read more
ဆီးကျောက်တည်ရောဂါ အတွက် သဘာဝဆေးနည်း ဤဆေးနည်းသည် ဆီးကျောက်တည်၍ ဆီမသွားခြင်း၊ ဆီးချုပ်ခြင်း၊ ဆီးနီခြင်း၊ ဆီးအောင့်ခြင်း၊ ဆီးနည်းခြင်း၊ ဆီးသွားသည့်အခါ ဆီးလမ်းကြောင်းနာကျင်ခြင်း၊ ကျောက်ကပ်ကျောက်တည်ခြင်းအတွက် လက်တွေ့ အသုံးပြု သပ်သာပျောက်ကင်းခဲ့သော ဆေးနည်းဖြစ်ပါတယ်။ ၄င်းဆေးနည်းအား မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်။ ပြုလုပ်ပုံ ၁။ ငါးပုတ်သင်ခေါင်းထဲမှ ကျောက် ကိုကျွမ်းအောင်လှော် အမှုန့်ကြိတ်ပြီး ၄င်းအမှုန့် (၁)ကျပ်သားနှင့် မက်လင်ချဉ်မှုန့် (၁)ကျပ်သားကို ရောပါ။ ၂။ သံပုရာသီး (၁)လုံး အရည် ညှစ်ပါ။ ၃။ ရောထားသော ဆေးမှုန့်် လက်ဖက်စားဇွန်း ၁ဇွန်းခန့် ကို ၄င်းသံပုရာရည်နှင့် သောက်ပါ။ (၃)ရက် ဆက်တိုက်သောက်ပါ။ ကျောက်များ ကျေပါမည်။ ဆီးသွားသည့်အခါ ကျောက်မှုန် /အနည်များ ဆီးနှင့်အတူ ပါလာပါမည်။ ညအိပ်ရာဝင်တိုင်း(ကျောက်ဖရုံသီး အရည် ၁ခွက်ိ … Read more
မီတာခ ကင်းလတ်ခွင့် ပုံမှန် ၁၅၀ ယူနစ်ဖြစ်သော်လည်း ဩဂုတ်လတွင်၂၂၅ ယူနစ်ထိသုံးစွဲခွင်ရမည်
August 30, 2020 by Latest Myanmar News
ဩဂုတ်လမီတာခ -၂၂၅ ယူနစ်ကင်းလွတ်ခွင့်ရမည် ဇူလိုင်လမှာ ယူနစ် ၁၅၀ အခမဲ့ရတယ် ။ ဇူလိုင်ဘီလ်ထဲမှာယူနစ်-၇၅ပဲပေးတယ်။ ကျန် – ၇၅ ယူနစ်ကိုဩဂုတ်လ မှာဆက်ပေးမယ်။ ဒီတော့ဩဂုတ်လမှာရမဲ့ ကင်းလွတ်ခွင့်ယူနစ် ဇူလိုင်လ လက်ကျန် – ၇၅ ယူနစ် ဩဂုတ်လအတွက် -၁၅၀ယူနစ် စုစုပေါင်း – – – ၂၂၅ ယူနစ် Zaw Min Htun Unicode ဩဂုတျလမီတာခ -၂၂၅ ယူနဈကငျးလှတျခှငျ့ရမညျ ဇူလိုငျလမှာ ယူနဈ ၁၅၀ အခမဲ့ရတယျ ။ ဇူလိုငျဘီလျထဲမှာယူနဈ-၇၅ပဲပေးတယျ။ ကနျြ – ရ၅ ယူနဈကိုဩဂုတျလ မှာဆကျပေးမယျ။ ဒီတော့ဩဂုတျလမှာရမဲ့ ကငျးလှတျခှငျ့ယူနဈ ဇူလိုငျလ လကျကနျြ – ရ၅ ယူနဈ ဩဂုတျလအတှကျ … Read more
ကြွက်တက်လို့ ကြွက်သားနာခြင်း၊ကိုယ်တွင်းကအရိုးနာ၊ အရွတ်နာခြင်းတို့အတွက်
ကိုယ်တွင်းကအရိုးနာ၊ အရွတ်နာ၊ ကြွက်သားနာ တာတွေကို ဆားမီးလှော်အပူလေးနဲ့ကြပ်ပူထိုးရင်ပျောက်ပါတယ်။ ဆားလက်တဆုတ်ကိုအိုးထဲထည့်လှော်ပါ။ အငွေ့ထွက်ပြီးပူလာရင် အဝတ်လေးထဲထည့်ထုပ်ပါ။ ပြီးရင်နာတဲ့နေရာကိုဖိဖိတို့ပေးပါ။ သက်သာရာကနေ ပျောက်ကင်းမှာပါ။ ၃-၄ ရက်တော့ဇွဲထားလုပ်ပေးပါ။ Grace Tun Shein Unicode ကိုယျတှငျးကအရိုးနာ၊ အရှတျနာ၊ ကွှကျသားနာ တာတှကေို ဆားမီးလှျေျာအပူလေးနဲ့ကွပျပူထိုးရငျပြောကျပါတယျ။ ဆားလကျတဆုတျကိုအိုးထဲထညျ့လှျောပါ။ အငှထှေ့ကျပွီးပူလာရငျ အဝတျလေးထဲထညျ့ထုပျပါ။ ပွီးရငျနာတဲ့နရောကိုဖိဖိတို့ပေးပါ။ သကျသာရာကနေ ပြောကျကငျးမှာပါ။ ၃-၄ ရကျတော့ဇှဲထားလုပျပေးပါ။ Grace Tun Shein
အဆုပ်သန့်နေအောင် အဆုတ်ထဲက အဆိပ်အတောက်တွေကို ရှင်းလင်းထားမယ်
အဆုတ် ထဲက အဆိပ်အတောက်တွေကို ဂျင်းနဲ့ ဘယ်လို ဖယ်ရှားမလဲ…? လူတစ်ယောက် အသက်ရှင်ဖို့အတွက် အရေးကြီးတဲ့ အင်္ဂင်္ါ အစိတ်အပိုင်းတွေထဲမှာ အဆုတ် လည်း ပါဝင်နေပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် အဆုတ် ကျန်းမာရေးက အရေးကြီးပြီး အဆုတ် ကို သန့်စင်အောင် ထားရှိဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် ဆေးလိပ် သောက်တတ်သူတွေဆိုရင် အဆုတ် ကို သတိထားပြီး အဆုတ်ထဲက အဆိပ်အတောက်တွေကို ဖယ်ရှားပေးသင့်ပါတယ်။ ဂျင်း ဂျင်းကို အသုံးပြုပြီး အဆုတ်ထဲက အဆိပ်အတောက်တွေကို ဖယ်ရှားနိုင်ပါတယ်။ ၂၀၁၂ ခုနှစ်က တွေ့ရှခဲ့တဲ့ သုတေသနအရ ဂျင်းမှာ အဆုတ်ကင်ဆာ ရောဂါကိုလည်း ကာကွယ်နိုင်စွမ်းရှိပါတယ်။ အဆုတ်ကို သန့်ရှင်းဖို့ ဂျင်းရေနွေးကြမ်း မီးဖိုပေါ်မှာ ရေနွေးကို ပွက်ပွက်ဆူအောင် တည်လိုက်ပါ။ ပြီးရင် ဂျင်းကို … Read more
ကား ရှိသူများအတွက် ယာဉ်အန္တရာယ်ကင်းဝေးစေရန် အဆောင်
ယာဉ်အန္တရာယ်ကင်းဝေးစေရန် အစီအရင် မိတ်ဆွေများအားလုံး မင်္ဂလာပါ……။ ဆရာ မိတ်ဆွေများအားလုံးအတွက် ယာဉ်အန္တရာယ်ကင်းယတြာကောင်း တစ်ခုမျှဝေပါရစေ။ ယာဉ်စီးနေရင်း တိုက်မိသလိုခဏခဏဖြစ်နေသူများ၊ နမိတ်မကောင်းဖြစ်နေသူများ၊စက်ပစ္စည်းနှင့်ကံမဆပ်သူ၊ ယာဉ်အဝယ်မှား၍ ခဏခဏပြင်နေရပါသလား? အောက်ပါယတြာကိုပြုလုပ်ခြင်းဖြင့် မိတ်ဆွေများရဲ့အခက်အခဲများအဆင်ပြေသွားမည်ဆိုပါက ဆရာစေတနာ ယတြာတင်ပေးရကြိုးနပ်ပါတယ်။ ဤယတြာကို အင်္ဂါနေ့ ည(၇)နာရီမှ(၉)နာရီ (သို့)စနေနေ့ နံနက် (၆)နာရီမှ နံနက်(၉)နာရီအတွင်း စီရင်ရပါတယ်။ သံပုရာသီးတလုံးပေါ်တွင် ဆော့ပင်ဖြင့်” ဓ”အက္ခရာရေးပါ။နွားနို့ကိုကျိုချက်၍ အနွေးခံအောင်ထားပါ။ ထိုနွားနို့ထဲတွင် သံပုရာသီးကိုထားပါ။ထို့နောက် လက်ညိုးဖြင့် နွားနို့ကိုမွှေရင်းအောက်ပါဂါထာကို “သိဒ္ဓိသိဒ္ဓိမဟာသိဒ္ဓိ သိဒ္ဓိအပေါင်း ထောင်းထောင်းထပါစေ” ဟူ၍ (၉)ခါမွှေ (၉)ခါပြောပါ။ သံပုရာသီးကို အဝတ်စ အနီ (သို့) အနက်ဖြင့်ထုတ်၍ မိမိစီးသော ယာဉ်တွင်ဆောင်ထားပါ။ (သံပုရာသီးပုပ်သွားခြင်း ခြောက်သွားပါက ဤယတြာကို အသစ်တဖန်ပြုလုပ်ပြီး ဆောင်ထားရပါမည်) နွားနို့များကို အောင်သပြေ ၃ညွှန့်ဖြင့် ” … Read more
ဆား(သို့မဟုတ်) ဆားငံရည်ဖြင့် ဘာလို့ မလုတ်ကျင်းခိုင်းရတာလဲ
ဆားငန်ရည်နဲ့ ခံတွင်းကျန်းမာရေး အကျိုးပြုပုံ ဆားငန်ရည်ဆိုတာ ခံတွင်းကျန်းမာရေးအတွက် ကောင်းကျိုးများစွာ ပေးစွမ်းနိုင်တဲ့ အိမ်တွင်းဆေးဝါးတစ်လက်ပါပဲ သွား၊ လျှာ၊ သွားဖုံး၊ လည်ချောင်းကိုလည်း သန့်ရှင်းပေးတယ်။ သွားကိုက်၊ သွားနာ၊ အနာပေါက်တာ၊ ခံတွင်းအနံ့ဆိုးဖြစ်တာ၊ လည်ချောင်းနာတာ၊ သွားနှုတ်ပြီးချိန်မှာ သွားဖုံးထဲ ပိုးမဝင်စေဖို့နဲ့ အနာကျက်မြန်စေဖို့ ဆားငန်ရည်နဲ့ ပလုတ်ကျင်းတတ်ကြပါတယ် ဆားငန်ရည်နဲ့ ပလုတ်ကျင်းဖို့ သွားနဲ့ခံတွင်းဆရာဝန်တိုင်း ဘာလို့အကြံပြုတာလဲ အလွယ်ကူဆုံးနဲ့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးမရှိသလောက် နည်းသလို အိမ်တိုင်းမှာလည်း ဆားတွေ အလွယ်တကူဆောင်ထားတတ်ကြတာဆိုတော့ သုံးဖို့လည်း အဆင်ပြေစေပါတယ်။ ကုန်ကျစရိတ်လည်း နည်းတယ်။ လုပ်ဖို့အတွက် အချိန်စက္ကန့်ပိုင်းလောက်ပဲ ပေးရတာကြောင့် ဆားငန်ရည်နဲ့ အမြဲပလုတ်ကျင်းဖို့ အကြံပြုရခြင်း ဖြစ်ပါတယ် ဆားငန်ရည်ဟာ ခံတွင်းကျန်းမာရေးအတွက် ဘယ်လိုအကျိုးပြုပေးနိုင်လဲ ၁။ ပါးစပ်ထဲမှာ ရှိနေတဲ့ ဘက်တီးရီးယားပိုးမွှားတွေကို သန့်စင်ပေးတယ်။ သွားတိုက်တံနဲ့ အလွယ်တကူ … Read more